Dhaqdhaqaaqa Sahyuuniyadda ma ka soo horjeedaa akhlaaqda? Rabbi Michael Avraham
Dhaqdhaqaaqa Sahyuuniyadda ma ka soo horjeedaa anshaxa?
Jawaabta > Qaybta: Guud > Dhaqdhaqaaqa Sahyuuniyadda ma ka soo horjeedaa anshaxa?
Cadiir La weydiiyey 7 bilood ka hor
Salaan Rabbi, waxaan arkay inaad naftaada ku qeexday "Sionist diini ah", iyada oo aan lahayn xaraf, si aad u xoojiso in Sionism-kaagu uu ka soo jeedo (kaliya, ama inta badan) qiyamka akhlaaqda caalamiga ah. Haddaba, waxaan jeclaystay inaan ku waydiiyo fikirkaaga qoraalkan soo socda:
"Waa maxay cunsurinimo?
Cunsurigu waa takoorid ama cadaawad ku salaysan
Waa maxay Sionism?
Sahyuuniyadda waa dhaqdhaqaaq loogu talagalay in dawlad Yuhuuda laga dhiso xeebta koonfur-bari ee badda Mediterranean-ka, gobolkaas oo waagii ay Sahyuuniyadda soo ifbaxday ay u badnaayeen dad aan Yuhuud ahayn - Falastiiniyiin - Masiixiyiin iyo Muslimiin.
Hagaag, laakiin sidee taasi uga dhigaysaa Sionism cunsuri?
aad u fudud. Xusuusnow qeexida cunsuriyadda? Aynu isticmaalno:
Takoorka ku salaysan Qowmiyada - Sahyuuniyadda weligeed ismay waydiin ra'yiga Falastiiniyiinta u dhashay ee ku saabsan in dawlad Yuhuudi ahi ka dhisto dalkooda hooyo. Tani waa xadgudub halis ah oo lagu sameeyay mabaadi'da dimoqraadiyadda: inkastoo ay ka kooban yihiin 100% dadweynaha, qofna ma dhibin inuu weydiiyo waxa ay u maleynayaan Falastiiniyiinta hooyo. Waa maxay sababtu? Sababtoo ah si fudud maaha Yuhuudi. Mabda'a dimoqraadiga ah ee caanka ah - rabitaanka aqlabiyadda - ayaa loo diidayaa dadka u dhashay dalka, laakiin haddii ay ka yimaadeen asal qawmiyad khaldan. Falastiiniyiinta u dhashay dabcan waxay taageereen madaxbannaanida Carabta, laakiin ra'yigoodu ma ahayn mid xiiso leh. Tani waa sababta ay Sionist-yadu si adag uga soo horjeedaan sanadaha oo dhan ee loo xilsaaray samaynta golaha sharci-dejinta - sababtoo ah rabitaanka aqlabiyadda ayaa baabi'in doona ganacsiga Sahyuuniyadda.
Cadaawadda ku salaysan qowmiyadda - Tan iyo markii ay soo baxday Sionism, Falastiiniyiinta u dhalatay ee ku nool dalkooda ayaa loo arkay oo loo arkay inay yihiin "caqabad." Waa maxay sababtu? Sababtoo ah Sahyuuniyadda - dhisida dawlad "Yahuud" - waxay u baahan tahay aqlabiyad Yuhuudda ah ee dalka. Iyo sababta oo ah wakhtigaas waxaa jiray aqlabiyad cad oo aan Yuhuudda ahayn, joogitaanka dadkan asaliga ah waxay noqotay mid aan la rabin. Sahyuuniyadda waxay sababtay dhacdo aan la rumaysan karin: dadka waxaa loo arkay inaan la rabin - sababtoo ah waxay ku noolaayeen gurigooda. Iyo marka siyaasi Israa'iil ah ee casriga ah uu ugu yeero Falastiiniyiinta "qodaxda dhinaca" (sida muuqata qoraaga qoraalka wuxuu ula jeeday ra'iisul wasaaraha Israa'iil, Naftali Bennett, kaas oo sheegay in tani laga yaabo inay ka soo horjeedaan asalka niyad-jabka ah ee joogitaanka Falastiiniyiinta dhulalku "waxay farageliyaan" Israa'iil oo ku darsanaysa iyaga) in saameynteedu ay innagu jirto ilaa maantadan la joogo.
Raabbigu jawaab ma u hayaa sheegashooyinkan? Kuwani waxay u eg yihiin sheegashooyin aad halis u ah. Maxaa yeelay, waxaad tidhi, waxaad ahayd Sahyuuniyad siduu Daa'uud Ben-Gurion u ahaa Sahyuuniyadda, ma aadan ugu jawaabin iyaga oo leh, Kanu waa wixii nalagu amray Tawreed. Su'aashu, haddaba, waa maxay jawaabtaada iyaga, sida "dhibcaha cilmaaniga ah."
Fikradayda ayaa ah in qoraalka soo socda uu yahay wax aan jirin.
Marka hore, Sionism-kaygu kuma salaysna qiyamka akhlaaqda, sida xidhiidhka qoyskaygu aanu ugu salaysnayn akhlaaqda. Kuwani waa xaqiiqooyin uun. Waxaan ka tirsanahay qoyskayga, sidoo kale waxaan ka tirsanahay dadkayga. Iyo sida qoyskaygu u baahan yahay guri, dadkayguna sidoo kale waxay u baahan yihiin guri.
Qaybtan dalka ka mid ah waxa ku noolaa dad u dhashay oo aan lahayn hayb qaran, dawlad la’aan iyo dawlad la’aan. Dhib ma ahayn in ay halkan yimaadaan oo ay ku dadaalaan sidii ay guri qaran u heli lahaayeen iyaga oo xuquuqdooda ilaalinaya. Gaar ahaan waxay u soo bandhigeen qayb qaybsi oo way diideen. Dagaal bay galeen oo cuneen. Markaa ha ooyin.
Dhibco ay dalbato ma laha Waxay u jawaabtay 7 bilood ka hor
Waxa kale oo xusid mudan in tirada dadka gobolkan ku noolaa xilligii Sahyuuniyadda bilawga ahayd ay aad u yaraayeen, badidooduna ay ahaayeen muhaajiriin ka yimid dalalka deriska ah. Kordhinta dhaqdhaqaaqa Sionist iyo horumarinta ganacsiga iyo dhaqaalaha, qaar kale oo badan ayaa doortay inay halkan u haajiraan. Qiyaastii qarni ka dib waxay iyaguna go'aansadeen inay dad yihiin, inta soo hadhayna waa taariikh.
Tafsiirka Kobanheegan Waxay u jawaabtay 7 bilood ka hor
Takoorka maaha sababo qoomiyad ee waa lahaanshaha. Markaad xaq u leedahay inaad go'aansato shisheeyaha soo galaya gurigaaga, ma "faquuqid sababo qowmiyadeed." Ma jiro farqi asaasi ah oo u dhexeeya ka hortagga soo gelista hore iyo ka saarista shisheeyaha dib u eegis haddii ay ku soo weerareen gurigaaga adigoon joogin.
Dadka reer binu Israa'iil waxay asal ahaan ka kooban yihiin faracii Baabuloon iyo Rooma (ay ku jiraan kuwa aan waqti ku qaadanay qoyska) iyo tan iyo markaas dhaxalka waxaa loo tixgeliyaa milkiilayaasha sharciga ah ee dhulka.
Emanuel Waxay u jawaabtay 7 bilood ka hor
Laakiin iyada oo ay taasi jirto, Rabbi Michi waxa uu qabaa in ay jiri karto mustaqbalka awoodda iyo sidoo kale door bidayso "sixitaanka": halkan waa Ben Barak:https://www.srugim.co.il/620627-%d7%a8%d7%9d-%d7%91%d7%9f- %d7%91%d7%a8%d7%a7-%d7%90%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%97%d7%9e%d7%93-%d7%9e%d7%9b%d7%a4%d7%a8-%d7%9e%d7%a0%d7%93%d7%90-%d7%a8%d7%95%d7%a6%d7%94-%d7%9c%d7%94%d7%99%d7%95%d7%aa
Ma laga yaabaa in ay tahay waqtigii dib loo xisaabin lahaa anshaxa?
Ama ama Daaran Kacitaanka iyo dhicitaanka Bennett iyo macnahooda (Column 486)
Iyo gurigii saddexaad Daaran Kacitaanka iyo dhicitaanka Bennett iyo macnahooda (Column 486)
Dib-u-soo-celinta 'xaq' waxay u oggolaan doontaa laba aqal siyaasadeed oo loogu talagalay labadaba hadhka dadweynaha diinta qaranka Daaran Kacitaanka iyo dhicitaanka Bennett iyo macnahooda (Column 486)
Elhanan Daaran Jawaab nooc kasta ah.
7 Nadiifi marka aan loo baahnayn Daaran Jawaab ku saabsan daahirnimada qoyska